ဝါခေါင်မိုး: * * “3108” Day Nostalgia * *
အစ်မ ပျောက်ချက်သား ကောင်းနေတာ ဘလော့ဒေးမှပဲ ပြန်ပေါ်လာတော့တယ်...
ကမ္ဘောဒီးယားအကြောင်းလေးတွေ မျှော်နေတယ် အစ်မရေ...
ညီမလည်း အတူတူပဲ ဟတ်ပီး ဘီလိတ်တက် ဘလော့ဒေး...
September 06, 2013 2:28 AM
ပျောက်ချက်သား ကောင်းလိုက်တာဗျာ...နှစ်နဲ့တောင် ချီပြီး ပျောက်တာကိုး...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘလော့လေးတော့ တစ်ခါတစ်ခါ ပြန်လှည့်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေဗျာ...ဘလော့မဖတ်ချင်လည်းနေပါ...တစ်လတစ်ပုဒ်လောက်ကတော့ တင်ပါဦး...ခမာပြည်က အကြောင်းတွေ...ကျန်တာတွေလည်း ရေးစရာတွေ အများကြီးရှိသားနဲ့...
ဒီနှစ်ဘလော့ဒေးကတော့ တကယ့်မင်္ဂလာနေ့ပဲ အစ်မအိမ်သူရေ...ငုပ်ကောင်လေးတွေ ပြန်ထွက်လာလို့...း)
September 06, 2013 6:04 AM
ခုနက တင်လိုက်တဲ့ ကွန်မန့်လေး ဘယ်ပျောက်သွားပါလိမ့်...
September 06, 2013 6:06 AM
သတိတရရှိနေဆဲပါပဲ ဖတ်လိုက်ရတော့ဝမ်းသာမိပါတယ်.... Happy belated blog dayပါနော်
September 06, 2013 6:51 AM
အားလပ်ချိန်ရှိရင် ပြန်လာခဲ့ပါအစ်မ... အစ်မစာတွေပြန်ဖတ်ချင်သေးတယ်..
September 06, 2013 12:51 PM
Blog Day က စ လို့ .. ပြန် အသက်ဝင်လာတဲ့ Blogger ကြီးတွေ ရဲ့ update Post တွေ ကို ဒီရက်ထဲ ... ဆက်တိုက်လို ဖတ်နေရတာ တကယ်ပဲ ၀မ်းသာမိပါတယ် ခင်ဗျာ ...
ကလောင်စွမ်း ဆိုတာတော့ မဝေဖန်တတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ ... ။ မြန်မာ Blogger တွေ ရဲ့ အရေးအသားတွေမှာ ... ကျွန်တော် တွေ့ရအများဆုံး နဲ့ ပေါ်လွင်တာ က တော့ ... စေတနာ နဲ့ ရိုးသားမှု ပါပဲ ခင်ဗျာ ... ။
အဲဒီ အတွက် ... စာပြန်ရေးကြမယ် ဆိုရင် ရေးဖြစ်ကြစေဖို့ ... တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
September 07, 2013 1:24 PM
ဘလော့ဒေးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်လိုက်တော့မယ်း)
အရင်လို စာတွေ ပြန်ရေးနိုင်ပါစေ Sis ရေ.. FB မှာ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့်ကို အက်ပေးပါ. Sis ရဲ့ ဒီပို့စ်လေးကိုလည်း ဘလော့ဂ်ဒေးတက်ဂ်ပို့စ်လေး အဖြစ် Myanmar Blogs Digest page လေးမှာ တင်ဖို့ ယူသွားလိုက်ပါမယ်.
September 08, 2013 1:12 AM
ဒါလေးရိုက်ထည့်ဖို့ မေ့သွားလို့. :)
September 08, 2013 1:13 AM
ကိုညီ ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကနေ တဆင့်ရောက်လာပါတယ် အစ်မ
စကားမစပ်..ဖေ့ဘုတ်မှာ ရှိရင် ညီမကိုလည်း အပ်ပေးပါရှင်
September 09, 2013 6:05 PM
ညီမစန်းထွန်း၊ ဆရာဟန်၊ ညီမစံပယ်ချို၊ ညီမမိုးငွေ့၊ ကိုသိင်္ဂါရ၊ ကိုညိမ်းနိုင်၊ ကိုဘကြိုင်၊ ကိုရန်အောင်နဲ့ ညီမရွှေအိမ်စည် >>> ကွန်မန့်လေးတွေအတွက်ကော သတိရနေကြသေးတဲ့အတွက်ကော ကျေးဇူးကမ္ဘာနော်။ ဘလော့ကတော့ ကိုယ်တိုင်ကလဲ သံယောဇဉ် အမျှင်တန်းနေသေးတဲ့အတွက် တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကြိုကြား ကြိုကြားလေးရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါအုံးမယ်။
September 09, 2013 10:49 PM
ဘလော့ပေါ်မှာ စာလေးတွေပြန်ဖတ်ခွင့်ရလို့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာပါကြောင်း....
Sis က Charging ပြည့်မပြည့်တော့မသိဘူး. ကျွန်တော်ကတော့ ဒီပို့စ်လေးကို Myanmar Blogs Digest Page လေးအတွက် မသွားပြီဗျာ. :)
စာတွေ ပြန်ရေးနိုင်ပါစေ Sis.
September 10, 2013 7:08 AM
ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းသော ဘလောဒ့်ဒေး လေးပါ အစ်မရေ...
အခုလို ပြန်ပြီး စုစုစည်းစည်းလေး ဘလောဒ့်ဂါတွေ ပြန်မြင်ရတာ သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်
ဆက်လက်ပြီး ရေးသား မျှဝေ နိုင်ပါစေ ဗျာ ....။